Toy izany koa ireo tranga vaovao Vica tady ho an'ny iPhone | Avy amin'ny mac aho
Toy izao ny tranga Vica tady vaovao ho an'ny iPhone
Mandritra ny fotoana fohy, ny tranga iPhone lamaody dia ireo izay manampy tadin-tsarimihetsika hanantonana ilay fitaovana amin'ny hatoka. Ao Vica izy ireo dia miditra amin'ny sarin'ny tariby tady na tadiny ary apetrany eny an-tsena ny azy ireo tanany vaovao antsoina hoe Vica Lace.
Ireo fonosana ho an'ny iPhone misy antsika dia voajanahary 100% ary azo zezika, vita amin'ny akora biolojika manaja ny natiora araka ny filazan'ny mpanamboatra azy ihany. Amin'ity tranga ity, ireo maodely vaovao dia manampy tadidy azo esorina, miaraka amin'izany afaka misafidy ianao na hanantona ny iPhone na tsia.
Ny orinasan'ny Espaniola Vica dia manana katalaogim-bokatra somary malalaka ho fitaovana ho an'i Apple. Tsy isalasalana fa ity orinasa ity dia manao banga amin'ireo orinasa marobe izay natokana ho an'ny kojakoja ho an'ny fitaovana finday sy solosaina. Mba hahazoana an'ity lavaka ity dia mila manao zavatra isan-karazany ianao ary izany no antony miditra Vica Designs miasa mafy izy ireo amin'izany.
1 Safidinao raha te-hitafy na tsy misy tadiny ianao
2 Fitaovana famolavolana sy fanamboarana
2.1 Fiarovana iPhone tsara amin'ny raharaha amin'ny
Safidinao raha te-hitafy na tsy misy tadiny ianao
Ary ireo tanany ireo dia miorina amin'ny fahazarana izay ny tanany dia manampy ny tadiny izay azo apetraka ao anaty kofehy vita amin'ny fomba amam-panao eo am-pototry ny tanany fotsiny. Midika izany fa ny mpampiasa dia tsy voatery mitondra ny iPhone mihantona foana raha tsy tiany, na dia tena izy aza Ny zavatra mahaliana momba ireo fonony ireo dia ny fanaovana akanjo mihantona.
Ao Vica dia manana modely maromaro mitovy amin'ireto Lace ireto izy ireo izay tsy manampy ny tadiny, ka raha tsy te hampiasa an'io tady io ianao dia manoro hevitra anao izahay modely hafa toy ny Roots, Eco, Deco na mitovy aminy izay ananany ao amin'ny katalaoginy be dia be.
Tena manaja sy mampiseho mazava izany amin'ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana ny fonony izy ireo. Amin'ity tranga ity dia tranga misy famolavolana mitovy amin'ny an'ny marika teo aloha izy io fa manampy ny mety hitondra ny iPhone mihantona noho ny tadiny. Ity famolavolana ity dia tsy natokana ho an'ny andry fotsiny ary mahita kojakoja mitovy marobe eny an-tsena isika fa tsy amin'ny kalitaon'ny fitaovana ampiasaina amin'ity orinasa ity.
Ireo fonony avy amin'ny orinasa Espaniola Izy ireo dia vita amin'ny mololo varimbazaha sy bioplastic 100% miaro ny tontolo iainana. Izy ireo dia manana tadiny hanantonana ilay iPhone izay, araka ny efa nolazainay teo aloha, dia afaka esorina ary apetraka amin'ny tsindry tokana. Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny tadiny ary tsy misy tadiny toy ny fonony mahazatra ihany koa.
Ny loko sy ny endriny dia hita amin'ny karazany rehetra ary Ireo fonony ireo dia ny famoronana marika manokana ka tsy misy mitovy amin'izany. Amin'ity indray mitoraka ity dia maizina ny maodely roa, fa manana loko maitso sy manga ary hafa izahay ho an'ity maodely fonosana ity. Aza adino koa fa manana fonony ho an'ny fitaovana Apple sy marika hafa izy ireo, ny tsara indrindra dia miditra amin'ny tranonkala ary jereo ho anao manokana ny vokatra isan-karazany ananany.
Fiarovana iPhone tsara amin'ny raharaha amin'ny
Ireo tranga ireo dia miaro ny fitaovantsika finday tsy ho any aoriana, izay manisy foana ny loza mety hitranga amin'ny fihantonana ny iPhone. Ny fitaovana anaovana ireo fonony ireo dia mitovy amin'ny silicone ary miaro ny finday amin'ny tadina kely sy ny votra izy ireo. Izy io dia fitaovana malefaka, miaraka amin'ny hatevin'ny 2mm izay manarona ny anoloana ihany koa amin'ny sisiny sy ny fakantsary.
Ity karazana tranga ity dia tena mahaliana amin'ny fotoana manokana rehefa lany ny paosintsika na mila miditra haingana amin'ny iPhone. Amin'ity tranga ity dia miaro tsara ny iPhone amin'ny fahasembanana izy ireo amin'ny fitondrana azy amin'ny vozony mazava ho azy. Ny ampahany anatiny amin'ny fonony dia malefaka ary amin'ny faritra ambany dia manana ny hantsana izy hametrahana ilay mpihazona lanyard ary tsy mihetsika izy raha vao ampidirina ny iPhone. Mety ho toa hianjera ny iPhone rehefa ahantoninao izy fa nosedrainay ny fanoherana azy ary afaka milaza izahay fa mihazona tsara, tsy hianjera amin'ny fotoana rehetra izy.
Ny vidin'ireto 27 euro isaky ny singa ireto ary mahita maodely maromaro misy izahay na amin'ny endrika na amin'ny loko. Tonga dia eo ny fahazoana ka amin'ny fotoana fividianana dia handefa ny vokatra ny orinasa ary haharitra eo anelanelan'ny iray sy telo andro vao tonga arakaraka ny toerana onenanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » iPhone » Toy izao ny tranga Vica tady vaovao ho an'ny iPhone
Ireo singa kely kokoa hampitomboana ny bateria amin'ny Mac, iPhone, sns.
Mark Gurman dia manazava ny "fotoana" antenaina hampitsahatra ny tetezamita Apple Silicon